Sethula ikhava ye-aluminium ye-air conditioning
Khetha ohlwini lwethu lwamaphethini aphilayo, emifanekiso kanye nawejiyomethri, noma wenze ihhovisi lethu lokuklama lithuthukise iphethini yangokwezifiso ukuze ivumelane nokubukeka kwakho okufunayo. I-Alunotec ihlinzeka ngezinsizakalo eziphelele zokuphela-kuya-ekupheleni.
Ikhava ye-Aluminium air conditioner iyisisetshenziswa sokuvikela sangaphandle se-air conditioner. Inezici zamandla aphezulu, ukufakwa okulula, ukubukeka okuhle, ukuchithwa okuhle kokushisa, ukuqina okuqinile nokunye. Idizayini eyingqayizivele yekhava ye-aluminium ye-air-conditioning ihambisana ne-air-conditioning ye-aluminium ye-air-conditioning ikhava, enemiphumela yokulwa nokweba, ukuvikela amanzi kanye nokuvikela ilanga. Inezici zamandla aphezulu, ukufakwa okulula, ukubukeka okuhle, ukuchithwa okuhle kokushisa nokuqina okuqinile.
Umdwebo odwetshiwe wekhava ye-aluminiyamu egoqekayo ye-air conditioner, ubukhulu obuthile: ubude a, ukujula B, ukuphakama H. ​​Ngokwesilinganiso sekhasimende, isitayela sekhava ye-air conditioning ethile kanye nephethini kwenziwa ngokuvumelana nezidingo zekhasimende.
Ipuleti le-aluminium elikhona ngokuvamile liwugqinsi elingu-2.5mm nogqinsi elingu-3.0mm ukuze lisetshenziswe ngaphandle. Ingenziwa kunoma yikuphi ukuma ngokusho komdwebo wokwakha. Samukela ukwenza ngendlela oyifisayo futhi sinikeza ukwesekwa kwedizayini. Ungaphinde usinikeze imidwebo ezokhiqizwa.
Imingcele yezobuchwepheshe yekhava ye-aluminium air conditioning
Uhlobo Iphrofayili ye-Aluminium yokuhlobisa
I-alloying Ingredient I-Aluminium Alloy 1100,1060, 3003, 3004, 5005
Iphrofayili ye-aluminium epholishiwe Ukupholisha Amakhemikhali
Ubuso I-Powder Coating, Fluorocarbon Spraying
Iwaranti Iwaranti yeminyaka engu-20
Ubukhulu 2.5mm / ngokwezifiso
Umbala Ngokwezifiso (Umbala Oqinile, I-Woodgrain noma i-Rockgrain)
Iphakheji Yezokuthutha Ifilimu Evikelayo, Ifilimu Yebhamuza, Ikesi Lokhuni
Isimo Flat, Curved, Goba, Trangle noma ngokwezifiso
Surface Finishing I-Powder Coating
Isitifiketi SGS, Ma, ISO9001:2008
Igama Lomkhiqizo Izesekeli Ikhava ye-Air Conditioner
Ukusetshenziswa Umhlobiso wangaphandle
Izitifiketi SGS, Ma, ISO9001:2008
Isikhathi sokuthumela Izinsuku ezingama-30-40 ngokuya ngobuningi
Uphawu lokuhweba I-AlunoTec
Ikhodi ye-HS 76109000
Ukupakishwa kwekhava ye-aluminium air conditioning
1.ifilimu yesitika sepulasitiki enelogo ----vikela kusukela ekuqaleni .
2.ifilimu yebhamuza----vikela ekuphahlazekeni
3. I-plywood pallet.----- kulula ukuyilayisha.noma eyenziwe ngokwezifiso ngokusho kwezicelo zamakhasimende.
PS: Hamba no-20' 40'GP/HQ. I-40'HQ ingalayisha cishe amaphaneli angu-1000sqm noma ikhava ye-air conditioner engu-1400 pcs.
Okwedlule: I-aluminium yokwandisa uphahla lwensimbi yensimbi enezikhala zokuhlobisa
Olandelayo: Insimbi engagqwali umhlobiso wezakhiwo wangaphakathi we-crimped wire mesh